ဟော်လန်ပန်း ပွဲတော် – Tulip Festival | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » ဟော်လန်ပန်း ပွဲတော် – Tulip Festival	35
ဟော်လန်ပန်း ပွဲတော် – Tulip Festival
Posted by ဇီဇီ on Apr 22, 2015 in Entertainment, Photography | 35 comments
မနှစ်က အခင်းလိုက် ရိုက်ခဲ့တာ များလို့ ဒီ နှစ်တော့ တစ်ပွင့်ချင်း အနီးကပ်တင်မလားလို့။
ဂျက်စပဲရိုး says: အေ၇ာင်တွေ ဖျော နေတယ် ဖြူနီကျား လေး ကို အလွန် သဘောကျ
ခင်ဇော် says: စနက်စိ ဂျီး အပ်ပဒိတ်လုပ်လိုက်ပြီး သုံးရတာ မအိုကေလို့ မပြင်တော့ပဲ ဒီတိုင်းလွှတ်လိုက်တယ်။
အောင် မိုးသူ says: သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းတွေထဲမှာ ဟော်လန်တွေ ကျူးလစ်တွေပါတယ်။ နောက်ထပ် လဗန်ဒါလည်းပါတယ်။ အခွင့်သာရင်တော့ လဗန်ဒါကို အပြင်မှာမြင်ဖူးချင်တယ်။ ဟော်လန်တွေ ကျူးလစ်တွေကိုလည်း အပြင်မမြင်ဖူးသေးဘူး။ အရမ်းချစ်ရတဲ့ ပန်းမျိုးတွေပါ။
ခင်ဇော် says: အမလည်း လာဗင်ဒါမမြင်ဖူးသေးဘူးးး
Mr. MarGa says: ဘာပဲပြောပြော လှပါတယ် စကားအတင်းစပ် camera+ ဆိုတာလေး သုံးကြည့်လေ
အိုင်ဖုန်းအတွက်ဆို 2.99 ဆိုလား
ဂျက်စပဲရိုး says: ကောင်းတယ် သုံးကြည့် သုံးကြည့်
မက်ခရို မုတ် တောင် ပါသေးတယ် ဟေး ဟေး ဟေး….
Ma Ei says: လိုချင်လိုက်တာ…
ခင်ဇော် says: ရောင်စုံ တစ်ခင်းလောက်ပါပဲ နော်..
Kaung Kin Pyar says: ပုံ ၁၀က ပန်းအရောင်လေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်…
တောင်ကြီးမှာတော့ ကန္တာရပန်းဆိုတာတော့ မှတ်မှတ်ရရ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးတယ်….အ၀ါရောင်လေးနဲ့
ခင်ဇော် says: အမ စိန်ပန်းပြာ အရောင်ရော အပင်ကို ရောကြိုက်တယ်။
နွေဆို အရမ်းလှတာ။ ရှမ်းပြည်မှာ။
Alinn Z says: လှလိုက်တာာာာာာာ
ခင်ဇော် says: ဖွေးဖွေးထက် လှဝူးလား
naywoon ni says: ပန်း​ဒွေဂ ပို့စ်​တင်​ထက်​သူထက်​ပိုလှ​နေသလိုလို ဘာလိုလို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: သူများကြားရင် အဟုတ်မှတ်နေမယ်။
Mike says: .ပန်းတွေပေါ…အပင်းတိုင်းလိုလိုပန်းပွင့်တဲ့ မေမြို့ကိုသတိရသွားတယ်…မရောက်တာတောင်ကြာပေါ့
.ကျူးလစ်တွေကိုလည်း အပြင်မမြင်ဖူးသေးဘူး။ .
ခင်ဇော် says: အမှန်ဆို မေမြို့မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
manawphyulay says: အရောင်စုံ အသွေးစုံပဲ။ အိမ်မှာ စိုက်ချင်လိုက်တာ။
ခင်ဇော် says: ကိုယ့်အိမ်မှာ ဆို မထိမ်းသိမ်းနိုင်လို့ သူများစိုက်ထားတာပဲ ကြည့်တော့မယ် ဆိုပြီးးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: No. 13! လာဗင်ဒါသွားကြည့်ရင် မီးကိုလည်း ခေါ်နော်.. မမဂျီး
ခင်ဇော် says: ကျူးလစ်ဆို အဲဒီ ပန်းကိုပဲ ပြေးမြင်တယ်။
လာဗင်ဒါက ဒီဘက်မှာ မတွေ့ဖူးဘူးးး
လာမယ်ဆိုတဲ့ အသံလည်း မကြားသေးးး
Wow says: ၁၀ က မခို့တရို့နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းဒယ်
ဦးကျောက်ခဲ says: Holland Village မှာ ပွဲလုပ်လို့ ဟော်လန်ပန်းပွဲတော်လို့ ခေါ်တာလားဟမ်…
Holland Avenue တို့ Holland Drive တို့ ဆိုရင် ဘိုလုပ်မလဲ …
စားမတဲ့ပန်းဆိုရင် စိတ်မဝင်စားဘူး … Tulip ကို ချဉ်ဟင်းချက်စားလို့ရလား… အ ဟိ
မြန်မာပြည်မှာ ဒီ ပန်းကို ဟော်လန်ပန်းလို့ ခေါ်လို့ အဲလို ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ထာ။
စားလို့ ရရင် ကျနော် အရင်ဆုံး ခူးလာတယ်။ဟိ
Crystalline says: ပန်းပွဲတော်ပဲရှိတာလား…. စင်ကာပူအစားအသောက်…အဝစားပွဲရောရှိဘူးလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အဲဒီ စားပွဲရှိရင်လည်း ဓာတ်ပုံတောင် မမြင်ရဝူးမှတ်။
မြစပဲရိုး says: ကျူးလစ် ဆိုတာ ပွင့်ဖတ်သွယ်သွယ် လို့ မှတ်ထားတာ လွဲပြီပေါ့။
. နောက်ပိုင်း ထွင်ပြီး စပ်လာတဲ့ မျိုး တွေ ထင်ရဲ့။
စကာင်္ပူကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကအကောင်းဆုံး တွေ ကို ရွေးပြီး ပျိုး ယူထားသလားပါဘဲ။
လှလိုက်တဲ့ ပန်းလေး တွေ။
ရိုက်သူလဲ တော်လို့ နေမှာပါ။
တစ်ချို့ အင်မတန် လှသူ ကို တောင် ရုပ်ဆိုးအောင် လက်စွမ်းပြနိုင်သူ ဓာတ်ဆြာ တွေလဲ ရှိနေတော့။
အကြိုက်ဆုံး ကို ရွေးရရင် နံပါက်၁၃ ပါ။
စုတ်ဖွားဖွားလေး တွေ က ချစ်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ ကျူးလစ် ရဲ့ အင်္ဂါ နဲ့ မပြည့်သလိုခံစားမိတယ်။
အရီး ထင်တာက မြန်မာပြည်မှာ ခေါ်တဲ့ ဟော်လန်ပန်း ဆိုတာ သစ္ပ္စပန်း (စစ်စပန်း) ကို ခေါ်တာလားလို့။ အရင်က ကျူးလစ် ကို မြန်မာပြည်ထဲ ရဖို့ ရှားတာမဟုတ်လား။
အထင်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ရိုက်တဲ့သူ တော်ဘူးးး
ဂလိုပဲ ပွိုင်အန်ရွှတ် ပဲ။
ကျူးလစ်ကို မြန်မာပြည်မှာ ဟော်လန်ပန်းလို့ ခေါ်တယ်လို့ သူများပြောမှ သိတာ။
black chaw says: ရှင်ဘုရင့် ပုဆိုး ပိုးချည့်ပဲ…။
ပန်းပုံလေးတွေ အတော်လေး လှပါတယ်ဗျာ…။
ခင်ဇော် says: နာ့ အကိုကြီးကို လွမ်းနေဒါးးးး
Ma Ma says: တခါတုန်းက မောင်ဂီ ကျူးလစ်ပန်းတွေတင်ဖူးတယ်။
မွှေးနေမှာပဲလို့ မန့်မိတာ အနံ့မရှိဘူးဆိုလား မမွှေးဘူးဆိုလား ပြောတယ်။
တခါက ဓမ္မဒူတအရှင်ဆေကိန္ဒကျောင်းက ဘုရားခန်းရောက်တော့ ဘုရားဖူးရင်း အနံ့လေးသင်းနေတာ ရေမွှေးဖြန်းထားတယ်ထင်နေတာ။
ပန်းအိုးကို ကျူးလစ်ပန်းအစစ်တွေ ထိုးထားလို့လို့ ပြောတာနဲ့ ကျူးလစ်ပန်းဆိုမွှေးတယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်တာ။
မောင်ဂီပြောတာနဲ့ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေလို့ ကျူးလစ်ပန်းက မွှေးလား ဟင် ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဒီလောက် လှမယ်လို့ လည်း ထင်မထားးး မွှေးမယ်လို့လည်း ထင်မထားတာမို့ တော်တော်အံဩသွားပါတယ်။
အဆောက်အဦးကြီးထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ အေးပြီး မွှေးနေတာ အပြန် ဆံပင်မှာ ပန်းအနံ့တွေ စွဲလာတဲ့အထိပါ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အရောင်တွေ စုံနေတာပဲ .. ကျုပ်တို့ လောကကြီး အတိုင်းပဲ …
ဘယ်လိုပဲ အရောင်စုံစုံ၊ သူ့အရောင် သူ့သဏ္ဍန်နဲ့ ဆိုတော့ လိုက်ဖက်သားပဲ …
ဒါလည်း ကျုပ်တို့ လောကကြီး အတိုင်းပဲ …
ဒီအရောင်စုံ လောက ကို ဟောတစ်မျိုး ဟောတစ်မျိုးနဲ့ ရှုမငြီးရအောင် ချပြသွားတတ်သူဟာ …
အရောင်စုံ ပန်းဘုရင်မ တစ်ပါး ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ် …
အဟွတ် … အရေးထဲ ဒီချောင်းကလည်း တစ်မှောင့် …
ခင်ဇော် says: ချောင်းးမဆိုးး ခင်က ပြောတာပဲ ယူလိုက်တယ်